२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०९:०५
डा. अरुणा उप्रेती ‘तपाईहरुले महिनावारी ब्यवस्थापन गर्न के गर्नु हुन्छ’ ? सुर्खेत, बाँके, बर्दियाका केहीँ किशोरीहरुलाई दुई हप्ता अघि मैले सोधेकी थिएँ । “हामीहरु त घरको सफा ‘टालो’ (नेपाली भाषमा त्यो प्याड नै हो) प्रयोग गर्छौ । धोएर घाममा सुकाउँछौ र फेरी प्रयोग गर्छौ । आमाहरुको पुरानो सुती, हाम्रै पुरानो सुतीको पातलो आड्ने पनि प्रयोग गछौँ । यात्रामा जादाँ चाहिँ बजारबाट किन्छौँ, तर महंगो त पर्छ । एक प्याकेटको लागि झन्डै दुई सय पर्छ तर यात्रामा धुने सम्भावना हुदैँन ।” बाँकेकी १७ वर्षकी ढकाल थरकी एक किशोरीले भनिन् “म त मामाघर जादाँ मात्र बजारबाट किन्छु । हजुरआमा त महिनावारी भएको बेलामा ज्यादै छुवाछुत गर्नुहुन्छ ।
धन्न, “छौपाडी” मा जानुपर्छ भन्नुहुन्न तर यता नजा उता नजा, भान्छामा नजा, मन्दिरको बाटोमा नहिँड भन्नुहुन्छ । अनि त्यसबाट बच्न म त मान्दै मान्दिन । घरको ‘प्याड’ प्रयोग गरे त धोएर सुकाउनु पर्दा थाहा पाउनु हुन्छ, त्यसैले महंगो परे पनि म त्यहीँ किन्छु, प्रयोग गर्छु । अनि अखबारमा बेरेर फ्याँकिदिन्छु वा फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगेर जलाउँछु ।” ती किशोरीको साहस देखेर गजब लाग्यो । त्यहीँ बेलामा बजेटमा सरकारी स्कुलका छात्रालाई सित्तैमा ‘स्यानीटरी प्याड’ बाँड्ने कुरा भनियो । त्यो बेलामा मैले सोचेँ, के साँच्ची नै सरकारले दिगो रुपमा यो काम गर्न सक्छ ? कति पैसा लाग्छ ? कहिले सम्म बाँड्ने गर्छ ? महिनावारी ब्यवस्थापन गर्न गाउँघरमा किशोरी र महिलाहरुले के प्रयोग गरिरहेछन् भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेर मात्र यो ‘बजेट’ मा ल्याएको हो कि साच्ची नै सरकारले नेपालका सबै स्कुलमा बाड्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेँ आफैँलाई । काठमाडौंका शहरका सरकारी स्कुलमा त किशोरीले आफै प्याड किन्छन् । समस्या त गाउँमा छ ।
अनि मलाई याद आयो केही बर्ष अघि रामशरण अर्थमन्त्री भएर बजेट भाषण गर्दा “सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकिमा पाठेघर खसेका महिलाहरुको उपचार गर्न ‘रिङ पेसरी’ सित्तैमा उपलब्ध गराइनेछ” भनिएको थियो । अब महिलाहरुको लागि स्वास्थ्य शिविर गर्दा हामीले आफैँले ‘रिङ’ पेसरी लैजानु परेन भन्ने ठानें । अनि त्यसको ३ महिना पछि धादिङ र मकवानपुरमा महिला स्वास्थ्य शिविर ग¥यांै । त्यहाँ स्वास्थ्य चौकिमा पहिले नै फोन गरेर भनेका थियौँ । “त्यहाँ रिङ पेसरी त सरकारले दिइहालेको छ । हामीले ल्याउँनु पर्दैन नि” तर हरेक स्वास्थ्य चौकिबाट जवाफ भयो “सरकारको बजेट भाषणमा खोई के भन्यो थाहा छैन, तर हामीलाई त्यो खबर छैन । रिङ पेसरी पनि छैन ।” अनि हामीले आफैँ नै रिङ पेसरी किनेर लग्यौं ।
यो घटना भएको ५–६ वर्ष भन्दापनि बढि भएको छ अहिले पनि मैले बिरामी स्वास्थ्य चौकि र अस्पतालमा रिङ पेसरी आयो भनेर सोद्धा कुनै पनि स्वास्थ्य चौकिमा आयो भनिएको छैन । यो कुरा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न सचिव र कर्मचारीलाई भने, तर कसैले पनि वास्ता गरेन । ‘प्याड’ को कथा पनि त्यहि होला कि भन्ने डर छ । मैले ७ कक्षा देखि १० कक्षा सम्म सरकारी स्कुलमा पढ्ने किशोरीहरुको संख्या निकालें । यदि ११ लाख किशोरीहरु ७–१० कक्षामा घरमा पढ्छन् भने उनीहरुलाई एक महिनामा (एघार लाख) ११,००,०००×१०० रु. को मात्रै स्यनिटरी प्याड दिईयो भने रु. ११,००,००,०००।– (एघार करोड) पर्ने एक वर्षमा झण्डै रु. ११,००,००,०००×१२=१,३२,००,००,०००।– (एक अर्ब बत्तिस करोड) पर्दो रहेछ । यति धेरै रु. को प्याड बाहिरको कम्पनीको किनीयो भने कति धेरै पैसा पर्ने रहेछ ? यसमा कसैले विचार गरेको छ कि छैन ? के सरकारले आउँदो दशै सम्म नै करोडौ पैसा खर्च गरेर प्याड दिन्छ ? बजारबाट किनीएका स्यानेटरी प्याड व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला भन्ने पनि सोच्नै पर्छ
फ्रिजमा यी खानेकुरा राख्नु निकै घातक हुन्छ
किन हुन्छ हर्ट अट्याक ? जानी राखौँ हर्ट अट्याक आउने यी पाँच कारण
यी खानेकुरा भुलेर पनि एकसाथ खानुहुदैन, नत्र ज्यानै पनि जान सक्छन्
शरीरको मसल्स बनाउन जिम धाएर मात्र हुदैन, यी खानेकुरा खानु निकै जरुरि छ